संसदमा सामूहिक आवाज : भारतलगायत विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर !
संसदमा उठेका विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ
संसद बैठकमा भारत लगायत विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरूले विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धारका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डीला संग्रौला पन्तले वैदेशिक रोजगारीमा गएर विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारलाई विशेष विमान पठाएर भएपनि उद्धार गर्न माग गरिन् । उनले भारतमा काम गरेर नेपालको सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न माग गरिन् ।
‘रोजगारी गुमाएर विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपाली कामदारलाई विशेष विमान पठाएर उद्धार गर्नुपर्छ । भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएर नेपाली सीमामा रहेका लपत्र नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
नेकपाकी सांसद एवं संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले कोरोना समस्याका कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई नेपाल फर्काउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।
नेकपाकै निरुदेवी पालले कोरोनका कारण अलपत्र र कष्टकर जीवन बिताइरहेकालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन गृहकार्य थाल्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
नेकपाका दीपकप्रकाश भट्टले कामका लागि भारत गएका लाखौं नेपालीहरू संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकाले उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने बताए । भारतका विभिन्न प्रदेशले नेपाली सीमा क्षेत्रमा ल्याएर वनवासा र टनकपुर क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेका जानकारी गराए ।
कांग्रेसका तेजुलाल चौधरीले सीमामा बिचल्लीमा परेका श्रमिकको उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मालिकको सरकार भन्छ – उतै बस, भाग्य भए त्यसै बाँच, नभए त्यतै मर । श्रमिकको बिचल्ली भएको सरकारले देख्दैन ?’
नेकपाका दलबहादुर रानाले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । नेकपाकै दामोदर भण्डारीले भारतमा अलपत्र नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न माग गरे ।
राजपाका प्रमोद शाहले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा सरकार स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाए ।
संसद बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएको विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।